2015 | ပျူနိုင်ငံ
(ဤလင့်ခ်ကို ပြန်နှိပ်ပြီuးp to date နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များကို ထပ်မံ့ကြည့်ရှု
(၂၆) ဖြူးမဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာသာ ကြံ့ဖွတ်ဖက်က ပြိုင်တဲ့ သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ NLD
ကိုယ်စားလှယ်တို့ မဲကွာခြားချက် အနည်းအငယ်ကလွှဲရင် ....
ကျန်နေရာ အများစုမှာ NLD အပြတ်အသတ် အနိုင်ရနေပါတယ် ....
ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်း၊ တောင်ဥက္ကလာပတို့မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ NLD နိုင်သလောက် ဖြစ်နေပါပြီ ...
ဂန့်ဂေါမှာ နာမည်ကျော် ဘူးလက်လှဆွေ မဲအပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်နေပါပြီ ....
နေပြည်တော် ဇမ္မူသီရိမှာလည်း NLD က ဖြိုးဇေယျာသော် ခိုင်မာ မဲ ပြန်လည်ရရှိနေပါပြီ .....
(၂၅) ရေစကြိုမျြို့နယ် ကျောက္ကာကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တံခါးကျေးရွာတွင် ပြည်သူ့
လွှတ်တော်၌ NLD ဒေါက်တာ တင်ဌေးအောင်က ၁၅၂ မဲ USDP မှ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး
ဦးစိုးမောင်က ၆၅ မဲဖြင့် ဦးစိုးမောင် ရှုံးနိမ့်သည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် NLD
ဦးကျော်ငွေက ၁၅၆ မဲ USDP ဦးတင်မောင်ကျော်က ၆၁ မဲ ဖြင့် USDP ကိုယ်စာ
လှယ်လောင်း ရှုံးနိမ့်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး ၁ တွင် NLD ဦးတင်သောင်းက ၁၅၆ မဲ
USDP ဦးမြင့်နိုင်က ၆၂ မဲဖြင့် ဦးမြင့်နိုင် ရှုံးနိမ့်သည်။ (11 news)
(၂၄)ဗဟန်းမြို့နယ် ဆရာစံတောင်ရပ်ကွက် မဲရုံအမှတ်(၅) စတင်ရေတွက်နေ ….
NLD 16 …. USDP 8 …. ညိုညိုသင်း 8 (facebook)
(၂၃) ယခုလောလောဆယ် မဲရုံပိတ်လို့ မဲစတင်ရေတွက်ကာနီးမှာ ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့
မြို့နယ်အများစုမှာ လျှပ်စစ်မီးပျက်တောက်သွားပါပြီ။ (facebook)
(၂၂)ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာလည်း မီးပျက်သွားလို့ မဲရေတွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်နေ။
(၂၁) ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရပ်ကွက်ကြီး ၉ တပ်မတော်အုပ်ချုပ်မူကျောင်း ဝင်းအတွင်းရှိ မဲရုံ အမှတ် ၃ တွင် မဲများစတင်ရေတွက်နေပြီဖြစ်သည်။ (7 day news)
(၂၀) ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၆၇ ကျူးကျော်ရပ်ကွက် ရှိ မဲရုံတွင် မဲပေးနိုင်သူ ဦးရေ ၂၂၄၆ ရှိတဲ့အနက် မဲရုံမှာ တစ်ရုံထဲဖြစ်သည့်အတွက် အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး နေ့လည်၂ နာရီခွဲအထိ လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော်ရုံသာ မဲပေးထားသည်။ ။ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံလက်မှတ် ၄၀၀ ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိပြီး မဲရုံပိတ်ချိန်အထိ မဲပေးသူမကုန်ပါက တန်းစီနေသူများကို မဲရုံ ပရဝဏ်အတွင်း ထည့်၍ မဲပေးခိုင်းမည်ဟု ကော်မရှင်ကပြောသည်။ (7 day news)
(၁၉) ရန်ကုန်မြို့သာကေတမြို့နယ်တွင်မဲပေးသူဦးရေ၁၃၁၈၁၁ရှိရာ မဲရုံပိတ်ရန် တစ်နာရီခွဲလိုသည့် အချိန်တွင် မဲပေးသူ ၈သောင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်းကပြောသည်။ (7 day news)
(၁၈) နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် တောင်ပေါ်ဒေသ မဲရုံ ၂ ရုံတွင် NLD အနိုင်ရ။
(၁၇) ညောင်တုန်းမြို့တွင် မဲရုံအချို့ စတင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး မဲရေတွက်မှုများ စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ညောင်တုန်းမြို့ ကွမ်းသီးပင်ကျေးရွာအုပ်စု ဝဲနယ် အထက်စုရွာနှင့် ပေါက်ကုန်းကျေးရွာတို့တွင် မဲလာပေးနိုင်သည့် ဆန္ဒရှင်ဦးရေ ပြည့်မှီသွားပြီဖြစ်သောကြောင့် မဲရုံပိတ်သိမ်းကာ မဲရေတွက်မှု စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ညောင်တုန်းမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အောင်နိုင်ရေး ဥက္ကဌ ဦးအောင်မျိုးဝင်းကပြောသည်။ (11 news)
(၁၆) မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဦးအောင်မောင်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မဟာအောင်မြေ
မြို့နယ်၊ မဟာမြိုင် အပိုင်း(၁) မဲရုံ(၅)တွင် ကား (၅)စီးခန့်ဖြင့် အုပ်စုလိုက်နယ်ကျော်
မဲပေးမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် ဖြေရှင်းလျက်
ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ မဲပိုစာရင်းဖြင့် ပျော်ဘွယ်၊ ရမည်းသင်းဖက်က လာရောက်
သည်ဟု သိရပါသည်။ (facebook)
(၁၅)ဂန့်ဂေါနယ် အန်းတားရွာတွင် NLD အပြတ်အသတ် အနိုင်ရကြောင်း သတင်းများ
(၁၄) နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ဘိုမအုပ်စု၊ မဲရုံအမှတ်(၁) မဲစားရင်း
ပိတ်သွားပြီး၊ အာဏာရကြံ့ခိုင်ရေးမှ အနိုင်တွက်ထားသောကြံ့ခိုင်ရေးနယ်မြေ
မဲဆန္ဒရုံးတွင် မဲများရေတွက်ရာ NLD. -57 …. USDP-51
မဲပေးသူ-၁၄၃ယောက် NLDပြည်သူ့ပါတီမှအနိုင်ရရှိကြောင်း သိရ။
(၁၃) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတင်နိုင်သိန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကလောမြို့နယ်တွင် မဲဆန္ဒနယ် ပြင်ပရောက် တပ်မတော်သားများ၏ ကြိုတင်မဲများ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်တွင် မြို့နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှ လက်ခံစဉ် မဲလက်မှတ် စာအိတ်များ ပွင့်လျက်ရှိကြောင်း ကလောမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောကြားသည်။ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာသော တပ်မတော်သား မဲဆန္ဒရှင်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် မဲစာအိတ်များ ပွင့်နေကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အောင်နိုင်ရေး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်လှဦးက ပြောကြားသည်။ (11 news)
(၁၂) ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ်၊ တည်ငြိမ် နံ့သာကုန်း ရပ်ကွက်မဲရုံအမှတ် ၅ တွင်
မဲပေးခွင့်ရှိသူ ၁၁၈၄ ဦး ရှိပြီး ယခု နေ့လည် ၁ နာရီ အထိ ၅၀၀ ကျော်သာ ပြီးစီး
၍ အချိန်မလောက်မှာကို စိုးရိမ်နေရ။ (facebook)
(၁၁) ကောလင်းမြို့ သုဝဏ္ဏ ရပ်ကွက်ရှိ မဲရုံတွင် တာဝန်ကျ အလယ်တန်းပြဆရာမအပါအ ဝင် မိသားစုသုံးဦးစလုံး မဲစာရင်း ၌ အမည်မပါသဖြင့် မဲပေးခွင့် မရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၁၀) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်အတွင်းမှ မဲရုံပေါင်း ၃၆ ရုံမှ
မဲဆန္ဒရှင် ၇၅၈ ဦးအား ပျမ်းမျှကောက်ယူထားသော စာရင်းအရ မဲပေးထားမှုအခြေအနေ
မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ NLD ပါတီ - ၇၀၀ ဦး … USDP ပါတီ - ၂၄ ဦး …
မဖြေဆိုသူ - ၃၂ ဦး … တစ်သီးပုဂ္ဂလ - ၁ ဦး …. မဲမပေးရသူ - ၁ ဦး။ (11 news)
(၉) ပျော်ဘွယ်မြို့ပေါ်ရှိ မဲရုံတစ်ရုံတွင် မဲရုံမှူးမှ တံဆိပ်တုံးကိုယ်တိုင်ဝင်ထုပေးမှုဖြစ်ပွား
ပျော်ဘွယ်မြို့ပေါ်ရှိ ရွှေပြည်ရန်အောင်မဲရုံအမှတ်(၁)တွင် မဲရုံမှူးဖြစ်သူ
ဒေါ်နီလာညွှန့်မှ မဲပေးသူ ၁၀ ဦးအတွက် ကိုယ်တိုင်တံဆိပ်တုံးဝင်ထုပေး
မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ပျော်ဘွယ်မြို့ NLD မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
လောင်း ဦးကျော်စိုးထံမှသတင်းရရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သတင်းကြားသည့်အတွက်
ဦးကျော်စိုးမှ သွားရောက်တားခဲ့ရာ ဒေါ်နီလာညွှန့်မှ မဲပေးရန်လာရောက်သူများထဲမှ
၁၀ ဦးအတွက်ကို ၄င်းကိုယ်တိုင်ထုပေးလိုက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါ ၁၀ ဦးမှ
အကူအညီတောင်းသည့်အတွက် ထုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မဲရုံမှူး
များမှာ အကူအညီတောင်းလျှင် လုပ်ပေးခွင့်ရှိသည်ဟု ပြန်လည်ပြော
ကြားကြောင်းနှင့် အသက်ကြီးသူများပါဝင်၍ အကူအညီတောင်းသည့်အတွက်
ထုပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဦးကျော်စိုးထံမှ သိရှိရသည်။
(၈) တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ဆူးကောက်ကြီးကျေးရွာ ညောင်ကုန်းမဲရုံတွင် ပြည်သူ့
လွတ်တော်အတွက် NLD ၆၄ မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၅၃မဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်အတွက်
NLD ၆၄မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၅၁မဲ၊ တိုင်းဒေသကြီး NLD ၆၇မဲ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး ၅၃မဲ ….
မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ နည်းသဖြင့် ပြီးစီးသွားပါကြောင်း သိရ။ (facebook)
(၇) ထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိ မဲရုံတချိူ့တွင် မဲရုံဧရိယာအတွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်များက သူတို့
ပါတီအား မဲထည့်ရန် ဇွတ်အတင်း စည်းရုံနေ။ (Facebook)
(၆)မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး … “ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ဖက်မှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့်
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလောင်းအမည်က မဟာအောင်မြေ မဲလက်မှတ်တွေထဲမှာ ရိုက်နေတယ်၊
ကျွန်တော့်နာမည်က ပါလိုက်မပါလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်” ဟု NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
ဦးဇာနည်အောင်က မီဒီယာများထံ ပြောကြား။ (Friday Times News Journal )
(၅) ဘားအံမြို့အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက်ရုံးများတွင် ကြိုတင်မဲပေးလျှက်ရှိရာ
နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်က ရဲတပ်သားထွန်းထွန်းဦးမှ ကြိုတင်မဲပေးပြီးနောက် တံဆိပ်တုံးကို
ကိုင်ပြီး အခြား ရဲတပ်ကြပ်လှမိုး၏ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အားဝင်ရောက် ရိုက်နိုက်လိုက်
သည့်အတွက် မဲရုံအတွင်း စောင့်ကြည့်နေသော လူ့ ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်
ပါတီ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဇော်မင်းဦး(ခ)
ဇော်ရဲထက် မှ ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (11 news)
(၄) ကလေးမြို့ ဘုရင့်နောင် လမ်းပေါ်ရှိ မိတ္တူဆိုင်တွင်
ကြိုတင်မဲဟု ယူဆရသော စာရွက် ပါဝင်သော စာအိတ် များစွာကို
ကော်ကပ် ပိတ်နေသည့် ဖြစ်စဉ်အား ကော်မရှင်ထံသို့ NLD တိုင်ကြားမည်။
(၃)စစ်အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် အပါအ၀င် စစ်အာဏာရှင် မိသားစုများ ကြိုတင်မဲအား ဥပဒေအတိုင်း မဲရုံတွင် သွားရောက် မပေးပဲ နေအိမ်တွင် မဲပေးနေကြောင်း The Voice Weekly ဂျာနယ်မှ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြ။
(၂) ရှမ်းပြည်နယ် ကလောမြို့ နှင့် ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့များထံသို့ ကြိုတင်မဲပြားများ ကြေမွပြီး
(၁) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခရမ်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ( ၂ )၊ ဆင်မင်းအိုင်ကျေးရွာတွင် ရပ်/ကျေး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးရှိ ကြိုတင်မဲထည့် မဲပုံးကို ဆင်မင်းအိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဘုန်းတော်ကြီး အရှင်သုနန္ဒက ကြိုတင်မဲပုံးကို မဲရုံမှ ၎င်း၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ယူဆောင်သွားပြီးနောက် ၎င်းအလိုရှိသူများကို ကြိုတင်မဲများ ပေးစေခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် နံနက်တွင် ခရမ်းမြို့နယ် ရပ်/ကျေးကော်မရှင်မှ မဲပုံးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပြန်လည်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ယမန်နေ့ ညဦးပိုင်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ မဲပုံးယူဆောင်သွားစဉ်တွင် ကြိုတင်မဲ ၆ မဲ သာရှိခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပြန်ယူဆောင်ခဲ့ချိန်တွင် ကြိုတင်မဲပေါင်း ၁၁ မဲ ဖြစ်နေပြီး ယမန်နေ့ညက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကြိုတင်မဲ ၅ မဲ ပေးစေခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည်ဟု ခရမ်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ ကိုသိန်းဇော်လတ်ထံမှ ကြားသိရသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အရာရှိ၊ ဦးခင်ဇော်ထွန်းထံသို့ ၈၈မျိုးဆက်( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)ရုံးမှ သတင်းပို့ တိုင်ကြားထားသည်။
Posted by ကိုအောင် at 18:250comments
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ up to date သတင်း အချက်အလက်များ...